Guddoomiye Mursal “Tirada haweenka ee hadda fadhida Baarlamaanka labadiisa aqal waa 27%” – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo shalay ka hadlayay shirweynaha haweenka Soomaaliyeed ayaa sheegay in tirada haweenka ee hadda fadhida Baarlamaanka labadiisa aqal ay yihiin 27 boqolkiiba.
Saddexda ka dhiman waxaa uu sheegay in la buuxin doono inta lagu jiro doorashada sannadka 2020-21. Labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa horay u ansixiyay in qoondada haweenka ay tahay 30 boqolkiiba, balse haweenka ayaa wali muujinaya wal-wal badan oo ku aadan in aysan helin tirada saxda ah ee loo qoondeeyay.
Shirweynaha haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay caqabadaha haweenka ku hor-gudban dhinaca doorashooyinka soo aadan iyo muhiimadda ay leedahay in la dhowro qoonddada dumarka ee kuraasta labada aqal ee Baarlamaanka dalka.
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka iyo Wasaaradda Maaliyadda oo ka wadda-hadlay miisaaniyadda 2021